Ukuhonjiswa → Ukuxutywa kweekhompyuter / umhombiso wentengiso kunye neengubo zomsebenzi
Zininzi iindlela zokuhombisa, ubuchule obutsha bunokudida abantu abaninzi xa bejongane nokukhetha kwabo. Isigqibo ngohlobo lokumakisha luxhomekeka kwizinto ezininzi. Ukuchonga injongo yesinxibo okanye eyolukiweyo yokushicilela kunokusinceda sikhethe indlela ethile. Nokuba yeyiphi na indlela yokumakisha oyikhethayo, ukuthungwa kweemfakamfele kuhlala yeyona ndlela iphambili.
Eyona ndlela indala yokuhombisa
Ngobugcisa yaziwa ngamawaka eminyaka ukubulela kwifom yayo yendalo iphela, ihlala iluncedo ngalo lonke ixesha. Ngenxa yoko, amalaphu ahonjisiweyo abukeka emhle kakhulu kwaye aqinisekisa ubomi obude ngakumbi kunamalaphu ahonjiswe ngezinye iindlela.
Ikhefu kunye nemizobo eyenziwe nge-embroidery yekhompyutha
Imihombiso ngalo lonke ixesha
Eyethu sayina ijongene nokwenza okuhlala ixesha elide nokusebenza ngokufanelekileyo imihlobiso emsebenzini kunye neempahla zentengiso, kunye nehotele kunye namalaphu e-gastronomic. Sineyethu ipaki yomatshini, esivumela ukuba siqinisekise amaxabiso okhuphiswano kunye namaxesha amfutshane okuhambisa.
Senza konke okusemandleni ukugqiba iodolo nganye. Iqela lethu liya konwaba ukukunceda ukhethe iimveliso kunye nendlela yokuhombisa. Sikwabonelela ngenkonzo yokupakisha impahla.
Ukuphunyezwa isambatho sekhompyuter ifuna ukuthengwa kwenkqubo yokuhombisa. Le ndlela icetyiswa kubungakanani bemizobo emincinci. Nje ukuba inkqubo yokuhombisa ithengiwe, ihlala kwindawo yethu elungileyo, ke xa ubuyela kuthi kunye nomnye umyalelo, awuyi kuhlawuliswa ngokulungiselela inkqubo efanayo okwesibini. Yindlela entle kakhulu kwaye engenasiphelo yomhombiso.
Kubetha ngokwenene kwabo babeka ukuzinza kwindawo yokuqala. Ifakiwe waba nakwiminyaka kamva ibukeka intle. Oku kuyokwanelisa abo banomdla malunga nomfanekiso wenkampani yabo. Olu hlobo lokuprinta lukwacetyiswa ngeempahla ezihlanjwa rhoqo ezibonakaliswe kwizinto ezomeleleyo zokuhlamba iimpahla.
Inkqubo yokusebenzisa i-embroidery yekhompyutha
Ukuprintwa kwesikrini yindlela yokuhombisa apho uhlobo lokushicilela luyitemplate esetyenzisiweyo kwimingxunya eshinyeneyo. Umnatha unokwenziwa ngesinyithi okanye ifayibha yokwenziwa. Ukwenza ikopi kubandakanya ukuqengqa ipeyinti ngofa. Ukwenza ushicilelo lwescreen kubandakanya ukuthengwa kwematriki yoshicilelo.
Esi sisisombululo esihle xa ufuna ukufumana ifuthe lemibala enamanzi ngelixa ugcina Ukuchaneka kunye nokumelana nokukrwada. Iprojekthi egqityiweyo iya kubonakala iqinile iiveki ezininzi okanye iinyanga.
Iprojekthi nganye yenziwa ngokweemfuno zomthengi ngamnye. Qho sihlengahlengisa imveliso ngokwempahla kunye negrama kunye nendawo yemizobo ngokuvumelana nomthengi. Ngamaxesha athile, silungisa uyilo ngemvume yomthengi ukuze sifumane ezona mpembelelo zilungileyo.
Ukuprintwa kwesikrini akunakwenziwa kuphela kwimpahla, kodwa nakwizixhobo ezikhethiweyo
Ukuprinta ngokuthe ngqo yi-DTG
Ukuprinta kwe-DTG okanye "ngqo kwimpahla" indlela yanamhlanje yokuhombisa ngokuthe ngqo amalaphu kunye neempahla. Inkqubo ye-DTG ikuvumela ukuba ufake nayiphi na imizobo kwilaphu lomqhaphu okanye umqhaphu ngokudibanisa i-elastane / viscose. Imizobo yenziwa kusetyenziswa umshicileli okhethekileyo. Ukuprinta ngenkqubo ye-DTG kwenza ukuveliswa ngokugqibeleleyo kwemibala kunye notshintsho kumbala. Ukuprinta kunokwenzeka ngaphandle kwesidingo sokulungiselela uyilo kwisiqwengana nje esinye.
Ukuqina kokuprinta kwe-DTG kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Okokuqala, kwimodeli kunye neeparameter zesixhobo-esitsha isixhobo, ngcono umgangatho kunye nokusebenza. Enye into echaphazela ukuhlala ixesha elide ziindidi zeepeyinti ezisetyenzisiweyo, ilaphu ekuprintwa kulo kunye nezakhono zomsebenzi.
Ukuprintwa kwe-DTG, enkosi kukutsha kwayo, kunokusetyenziselwa zombini ukuvelisa ngobuninzi kunye nemveliso enye. Oku kwenza ukuba kuprintwe uvavanyo ngaphambi kokuqala lonke uthotho. Kwakhona lukhetho olukhulu lokuzalwa okwenzelwe wena, umtshato okanye izipho zesikhumbuzo. Kwiinkampani, sisisombululo esisiso ukuba sifuna umsebenzi ngamnye abe negama lakhe okanye isihloko somsebenzi kwiimpahla zakhe. Kukwanjalo nakwimpahla yokunxiba, umzekelo kwimpahla yeklabhu yezemidlalo, apho amanani ahlukeneyo aprintwa kwiihempe okanye ezimfutshane.
Umshicileli omtsha Mzalwana DTXpro Bulk, Esandise ngayo ipaki yethu yomatshini, yimodeli ebhetyebhetye kwaye eguquguqukayo kakhulu. Enkosi ngayo, unokwandisa indawo yakho yokugcina kunye neemveliso ezizezakho ezinje nge Iikipa wonke umntu onegama lakhe, isihloko somsebenzi, Iingxowa zentengisonditsho nezihlangu ezinomsebenzi wobugcisa isikali sobunzima ngokunjalo uthotho olulinganiselweyo.
Sisoloko sizibuza malunga isipho esikhethekileyo yabathandekayo kumsitho weKrisimesi, iPasika, uSuku loMama okanye usuku lokuzalwa. Sifuna isipho sethu sibonakale kwaye sihlale ixesha elide
Ukwenza ukuba kwenzeke, kufanelekile ukuba ucinge ngesipho esenzelwe wena, ngokufuthi ezisebenzayo azivelisi iinkumbulo ezimnandi kuphela, kodwa zikwasebenza ixesha elide.
Ukuprinta kwe-DTG ayifuni ukulungiswa kweprojekthi lolunye lwezona zinto ziluncedo ziphambili (njengoko kunjalo nangoshicilelo lwescreen okanye ubuchwephesha bekhompyuter). Kuyenzeka ukuba uprinte imizobo okanye imibhalo ebhalwe kwinto enye, nokuprinta ifoto kuyinyani kwaye ngakumbi kuthandwa kakhulu kwizipho, kodwa kubalulekile ukuba ifoto ikwisisombululo esona siphezulu. Ushicilelo lwe-DTG lukhethwe ngolangazelelo ziiarhente zentengiso kuba luphawulwa ngexabiso eliphantsi kunye nokuqina, okubaluleke ngakumbi xa kuququzelelwa iimpahla okanye amalaphu kwimisitho eyahlukeneyo okanye njengamabhaso okhuphiswano.
siyakumema Earlisenzo ngenkonzo yethu IvenkileNgubani ongavuya ukuphendula imibuzo yakho kwaye anike ikowuti yokumakisha yasimahla.
I sweatshi ezinophawu lweAllegrosweatshirts enegamaisambatho sekhompyuterILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- T-shirtsiihempe ezimakishiweyoimpahla enelogoimpahla enoshicilelouboya obunelogoukushicilelwa kwesikriniiimpahla zokuhombisaUkuhombisa iimpahla ze-allegroukumakisha iimpahlaukumakisha iimpahla